Yini ububi? | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 16/07/2021 22:51 | UMadres
Kujwayelekile kwabesifazane abaningi ngemuva kwamahora angama-48 bebelethile, uhlupheka ngokuqina kwesibeletho. Lokhu kufinyela kubizwa ngokungalungile futhi kukhulu kakhulu futhi kubuhlungu.
Amaphutha ashiwo ngenhla ajwayelekile ngokuphelele futhi abangelwa iqiniso lokuthi isibeletho kumele sibuyele osayizi baso bemvelo. Esihlokweni esilandelayo sizokhuluma nawe ngendlela eningiliziwe mayelana nokungalungile futhi ngokubaluleka abanakho ekutholeni ngokugcwele owesifazane obelethile.
1 Ubudlelwano phakathi kwamaphutha nokuncelisa
2 Ubuhlungu bokwenza okungalungile
3 Kungani kudingeka okungalungile
Ubudlelwano phakathi kwamaphutha nokuncelisa
Kukhona ubudlelwane obuqondile phakathi kwalezi zingqinamba zesibeletho nokuncelisa. Njalo lapho ingane ithatha ibele, umzimba wowesifazane ukhipha i-hormone i-oxytocin, okuholele ekulimaleni. Kungakho ukuncelisa kubalulekile uma kuziwa ekuvaleni imithambo yegazi etholakala esibelethweni futhi gwema ukuphuma kwegazi kwangaphakathi okungenzeka.
Ubuhlungu bokwenza okungalungile
Ukuphuphuma kwesisu kubuhlungu kakhulu futhi kukhulu ukusikwa kwesibeletho okuvame ukuhlala amahora angama-48 ngemuva kokubeletha. Uma kwenzeka ukuthi ubuhlungu bube namandla ngokwanele, owesifazane angathatha ibuprofen ukusiza ukudambisa izinhlungu ezinjalo. Lokhu okungalungile kuvame ukwenzeka ngamathuba amakhulu avela enganeni yesibili. Bambalwa omama abasanda kuthambekela abavame ukuba nezinciphiso zangemva kokubeletha.
Lapho izingane zanda, maningi amathuba okuthi zihlupheke ngamaphutha ashiwo ngenhla. Ubuhlungu futhi buzoncika kakhulu ekutheni ngowesifazane yini ingane yakhe yokuqala noma uma, ngokuphambene nalokho, esevele enezidingo eziningi. Uma kwenzeka ukuthi ngowesifazane kube ukubeletha kwakhe kokuqala, Ubuhlungu obuvela ekuxakekeni bumnene impela, bukhumbuza ngokuya esikhathini.
Endabeni yokuzala amawele noma ingane enesisindo esikhulu, izinhlungu zento engalungile ziqine impela futhi zinamandla. Ezimweni ezinjalo izinhlungu zibaluleke impela, ngakho-ke imvamisa badinga ukuthatha uhlobo oluthile lomuthi ukusiza ukudambisa lobu buhlungu besisu.
Kungani kudingeka okungalungile
Okokugcina, kufanele kuboniswe ukuthi amaphutha ayadingeka futhi njengokwemvelo, ngoba kungenjalo, lo wesifazane osanda kubeletha angahlaselwa ukopha ngaphakathi okungabeka impilo yakhe engcupheni. Kubalulekile ukuthi ngemuva kokubeletha, isibeletho sibuyele kancane kancane endaweni yaso bese sithola ubukhulu baso bemvelo. Lokhu kufinyela kusiza lokhu ukuthi kwenzeke futhi akukho ukopha kwangaphakathi.
Ngamafuphi, lo wesifazane ovele nje wabeletha ingane yakhe, akufanele ukhathazeke nganoma yisiphi isikhathi ngokuba nezinciphiso eziqinile noma okungalungile ngaphakathi kwesibeletho sakho. Lokhu kufinyela kuyadingeka ukuze isibeletho sikwazi ukuzikhipha ngaphandle kwezinkinga zezinsalela okungenzeka ukuthi zibangele ukulethwa.
Khumbula ukuthi imvelo kufanele ihambe ngendlela yayo futhi kubalulekile ukuthi isibeletho sifuduke futhi sikhuliswe ngenxa yokukhulelwa, qeda ngokubuyela kusayizi wayo wemvelo nokuzibeka ngokwakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Yini ububi?
Lezi yizindwangu ezihlangene zamafemu wemfashini asimeme